iOS 11 yatopfuura iOS 10, yakamira pa47% yezvishandiso | IPhone nhau
iOS 11 yatopfuura iOS 10, ichisvika 47% yezvigadzirwa
Mavhiki matatu mushure mekuvhurwa kweIOS 11, iro regumi neimwe vhezheni yeIOS yatove pa47,93% yemidziyo inoenderana, inodarika iOS 10, ine mugove panguva yekunyora chinyorwa ichi i45,83%, zvinoenderana nedhata rakapihwa naMixpanel, kubvira Apple pari zvino haipe ruzivo urwu pane yekuvandudza portalZvichida nekuti mwedzi hausati wapfuura kubva payakatangwa, panguva iyo vakomana vanobva kuCupertino vanotanga kupa zvirevo zviri pamutemo pakugamuchirwa kweIOS 11 pazvinhu zvese zvinotsigirwa. Haizove nguva yekutanga kuti Mixpanel dhata isingawirirane neApple, saka tichamirira vhiki kuti tione izvo portal yekuvandudza inotiudza nezvazvo.
Kuenderera mberi neMixpanel dhata, iyo yega "yepamutemo" data iyo Tine 6,22% yemidziyo inomhanyisa vhezheni yakaenzana kana yapfuura iOS 9. Semavhiki maviri apfuura, kutorwa kweIOS 11 kuchiri kunonoka kupfuura kuya kweIOS 10, sekukuzivisa kwandakaita vhiki rega rega. iOS 10 yakatora mavhiki maviri chete kurova iOS 9, inova yeIOS 11 anga ari mavhiki matatu marefu.
Mumavhiki matatu awa, Apple yakaburitsa mabheji maviri eIOS 11.1, inogadziridza inozopedzisira yodzosera multitasking kuburikidza nechikamu chekuruboshwe chechidzitiro ne 3D Kubata, nhamba hombe ye emojis nyowani, meseji kuwiriranisa kuburikidza neICloud uye pamwe Apple Kubhadhara Cash, chikwama cheApple kuburikidza neiyo Messages app. Asi pamusoro pezvo, yakaburitsazve matatu madiki ekuvandudza ayo asina kuenda muchikamu chebeta, sezvo anga achigadzirirwa kugadzirisa zvisizvo zvidiki zvakatambudzwa nemidziyo yakadai seyekushandisa kwechizvarwa chehurongwa hwese.
Izvozvi, uye kunyangwe kusagadzikana kwevashandisi vazhinji, Apple haina kutaura nezvenyaya dzebhatiri Vanoti vane vashandisi vazhinji, vashandisi vasina kungotsanangura izvo gehena Apple iri kumirira kuti vazive uye vosunungure diki gadziriso yerudzi urwu kugadzirisa matambudziko ebhatiri. Kutaura chokwadi, matambudziko aya anowanzo kuve chinhu chinowirirana neimwe itsva vhezheni yeIOS, asi zvinoita sekunge matambudziko aya ari kutora nguva yakareba pasina Apple kuita chero chinhu kuaziva nekuagadzirisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » iOS 11 yatopfuura iOS 10, ichisvika 47% yezvigadzirwa
Mamiriro acho aizove akasiyana kana iOS 10 ichiri kusainwa kudzikisira. Iyi theme yeIOS 11 inonyadzisa zvakakwana.
Apple yakagadzirira kuita Face ID pane ayo ese maPhones muna 2018
Yelp inogadziridza inopa kuenderana neApple Pay